Fa maninona no tsy mandeha ny vidéo voalohany? - Fahadisoana
Tena > Fahadisoana > Kaody fahadisoana 7135 - ny fomba hahatratrarana
Kaody fahadisoana 7135 - ny fomba hahatratrarana
Fa maninona no tsy mandeha ny vidéo voalohany?
Raha nyPrime Videofampiharanatsy mandeha, atombohy amin'ny alàlan'ny fahazoana antoka fa miasa ny kaontinao, ary avy eo jereo raha azo antoka fa mifandray amin'ny Internet ianao. Andramo ny mampiasaPrime Videoamin'ny fitaovana hafa, ary raha miasa any izy dia avereno ny fitaovana voalohany.16 Jul 2020
- Ireto ny tombontsoa 10 mpikambana vaovao Amazon Prime tokony ho fantatrao amin'ny 2021.
Faly aho fa manana anao eto. Tongasoa eto amin'ny fantsona. Izaho no YouTube Deal Guy, Matt Granite.
Mazava ho azy fa tsy mivoaka be aho. Saingy vao mainka faly aho anio satria ny maha-mpikambana anao amin'ny praiminisitra dia afaka manome tahiry fanampiny amin'ny drafitra findainao sy ireo fantsom-pahitalavitra tianao. Misy fomba iray handobohana indroa ary hahazo freebies koa, vitsy ny olona mampiasa azy io.
Tsy tohanan'ny lahatsoratra ity lahatsoratra ity, fa raha tianao ny atiny dia mba omeo fehezanteny. Manampy amin'ny fahatokisako tena na tsy fananako izany. Tombontsoa lehibe laharana voalohany, mitahiry amin'ny drafitra smartphone.
mpamily lifecam vx6000
Amin'ity taona ity, amin'ny 2021, ianao izao dia afaka mahazo 10% fanampiny amin'ny tahiryo rehefa mpikambana ao amin'ny Praiminisitra ianao ary manararaotra ny iray amin'ireo tolotra finday vaovao sy finday SMS tsy voafetra ho an'ny $ 20 isam-bolana fotsiny. Raha ny momba ny fianakaviako dia tsy dia mizotra be toy ny taloha intsony izahay.
Ka manoro hevitra ny tsirairay aho mba hijery ny drafitra findainy manokana. Hamarino fa ny tombotsoan'ny drafitra anananao amin'ny mpitatitra anao ankehitriny dia tena zavatra araraotinao. Anisan'izany ny tahiry ao anaty drafitra, ianao dia hahazo ity 10% fanampiny ity ho trosa isam-bolana.
Tsy misy fanamarinana bola, tsy misy endrika fenoina. Ary ireo drafitra tsy misy tariby izay mety ho hitanao amin'ny fanitarana ny boaty famaritana lahatsoratra dia hahita rohy ianao, mampiasa rohy afiliana aho amin'ny alàlan'ny tombotsoako ara-bola, raha tsara fanahy ianao amin'ny fampiasana ny rohy misy ahy, ovao amin'ny mahazatra mifototra isam-bolana, koa raha mahita zavatra mifandraika amin'ny mpamatsy ianao fa tsy adala tanteraka ianao izao, azoko atao ny manome toky fa rehefa mandeha ny fotoana, miaraka amin'ny fifanarahana finday avo lenta, ho faly ianao, na farafaharatsiny manantena ho kely sambatra kokoa raha momba ny mpanome smartphone anao. Ary ny toerana faharoa amin'ny fihenam-bidy voalohany.
Izy io dia mifamatotra amin'ny fandefasana adiny roa, izay vaovao any Amazon amin'ny 2021. Ny sakafo manontolo izao dia misy ed ho ampahany amin'ny varavarankelin'ny fandefasana adiny roa maimaim-poana any Amazon raha mpikambana praiminisitra ianao. Sakafo iray manontolo kely ivelan'ny teti-bolako, tsy voatery any amin'ny toeran-kafa fivarotana tsy tapaka aho, ary eny an-dalana, ry olona, ​​mitady mpivarotra enta-mavesatra na tahiry na zavatra tsara indrindra vidiana ao amin'ny Aldi na Trader Joe's na Costco izahay.
Manana an'ity fantsona ity aho fa ho anao izay miantsena amin'ny Whole Foods dia mety ho fanararaotana izao. Amin'ny laharana fahatelo dia safidy iray milentika indroa miaraka amin'ny carte de crédit Prime Rewards. Ary raha tsy mandinika an'ity carte de crédit ity ianao dia aza manahy ny milentika indroa rehefa manana io carte de crédit Amazon Prime Rewards io ianao.
Avelao fotsiny aho hamindra ny sariko midina bebe kokoa eo am-baravarankely an'ny lohako be loatra mifatotra amin'ny vatan'ny zatovo izay toa vatan'ny tanora amin'ny ankamaroanareo mba hahitanao ny fanontana tsara. Ohatra, raha toa ka tsara ny Roku Premier dia fitaovana fampitam-baovao streaming 4K HDR. Fihenam-bidy 29% izany.
Mitsitsy tsara. Fa raha manana ny carte de crédit Amazon Prime ianao ary mampiasa izany hamitana ny fividiananao dia hahazo valiny 10% fanampiny ianao. Ary indraindray io isan-jato io dia 15%.
Raha mijery ny Kasa Smart Plugs ianao izao dia 15% mora kokoa, nefa mahazo fihenam-bidy 15% fanampiny rehefa mampiasa ny carte de crédit Amazon Prime ianao. Ary taloha aho dia nahita tolotra famerenam-bola indroa indroa rehefa manana ny carte de crédit Prime Rewards ianao hatramin'ny 20 na 30%. Nahita iray tamin'ny fahitalavitra iray aho ary iray tamin'ny Robovac tsy ela akory izay.
Prime perk isa 4. Ny maha-praiministra anao dia tena manome anao tombony amin'ny sehatra maro fa tsy Amazon.com fotsiny.
Raiso ohatra ny Shopbop. Ny vadiko dia vao manomboka mahita raha mpivarotra antsinjarany tian'izy ireo izany, fa ny fandefasana maimaim-poana sy ny fiverenana maimaim-poana dia tsy ampahany amin'ny maha-mpikambana anao ao amin'ny Amazon Prime fotsiny, fa rehefa tsy miantsena any Shopbop, East Dane ianao, fandefasana maimaim-poana mandritra ny telo andro ary miverina maimaimpoana ary miverina raha mpikambana Amazon Prime ianao. Eo an-tampon'ny pejy io.
Ary ho an'ny tranonkala iray dia tsidihako matetika kokoa toy ny woot.com, tranokala manokana iray isan'andro izay manome fandefasana maimaimpoana amin'ireo mpikambana praiminisitra, sarany manomboka amin'ny $ 5,95 ka hatramin'ny $ 11, miankina amin'ny vokatra sy ny tolotra.
Ary ny tahirinao dia mety hitombo haingana be raha mpikambana praiminisitra ianao. Wow, henjana tokoa ireo abs ireo. Izy io dia toy ny fonosana 12 nahena 12 na fonosana 12 ary eo am-piandrasana azy aho amin'ny fotoana iray, antenaina amin'ny taona vitsivitsy ho avy.
Raha miresaka sakafo, alohan'ny hahatongavako amin'ny freebies, Amazon Prime ny tombony tombony laharana dimy dia mifamatotra amin'ny Amazon Fresh. Amazon Fresh dia $ 15 isam-bolana teo aloha, mba hahafahanao mandingana ny tsipika lava rehefa miantsena amin'ny fiantsenana an-tserasera sy misafidy varavarankely fanaterana mety aminao. Raha mbola mahatratra ny sandan'ny kaomandy farany ambany $ 50 ianao dia hahazo fandefasana maimaim-poana.
Ary faly indrindra aho tamin'ity fanovana mpikambana Prime ity satria mandoa $ 15 isam-bolana fotsiny aho mba hampiasa serivisy fivarotana izay tena nahasosotra ahy ny kely indrindra nataoko. Ary faly aho fa nesorin'izy ireo izany. Raha tsikaritrareo dia somary tezitra aho rehefa nandalo ny prime perk isa dimy.
Rehefa eo am-pialam-boly aho, malahelo na tezitra, iray amin'ny zavatra tokana mahafaly ahy ankoatry ny dite bubble dia fanomezana. Ka ho an'ny perks isa enina sy fito amin'ity lisitra ity dia hijery freebies aho ary avy eo dia hiditra amin'ireo fantsom-pahitalavitra atolotra, izay heveriko fa mahafinaritra. Raha mbola tsy fantatrao fa ao anatin'ny Prime Benefit isa fahenina dia nandefa ny programa Amazon Reads voalohany ho an'ny 2021 i Amazon.
Ary ny mpikambana ao amin'ny praiminisitra dia afaka misafidy boky Kindle maimaim-poana isam-bolana, izay fatra tsy mampino. Miakatra haingana ny tahiry. Ny ankamaroan'ireo boky ireo dia misy $ 4.99 na $ 9,99.
mangarahara loko ms
Ireo ananako izao dia matetika $ 4.99. Amin'ny maha-praiminisitra anao, dia afaka mandray boky maimaim-poana voafantina, lamaody na malaza be ianao, maimaim-poana.
Ho an'ny ray aman-dreny namana toa ahy. Voamariko fa ireo boky misy ny sary avo lenta kokoa noho ny $ 4.99 dia maimaimpoana ihany koa ho an'ireo mpikambana praiminisitra ao amin'ity lisitra ity.
Ny zanako roa taona dia tia ireo boky sary asehoko azy eto amin'ity lisitra ity. Ka, raha ray aman-dreny ianao na olon-dehibe fotsiny izay tena tia ankizy na boky sary dia sarona ianao. Tokony ho marihiko ihany koa fa ny Original Amazon Stories, ireo vaovaony fohy, dia maimaim-poana miaraka amin'i Prime ihany koa, ary vaovao ho an'ny 2021 sy fifaliana mahafinaritra izany.
Alohan'ny hahatongavako amin'ny fahitalavitra sy ny Prime Video, ny nomerao fahafito dia mifamatotra amin'ny magazine, ary io faritra io dia nanomboka herinandro vitsivitsy lasa izay, izay ahafahan'ny mpikambana praiminisitra mahazo famandrihana mandritra ny efa-bolana hanonta magazine amin'ny 99 cents. Ity dia tsara ho an'ny Fetin'ny Reny, Fetin'ny ray, fehikibo fampiatoana, tsingerintaona iray izay ahatsapanao fa tena mora ny hatsaràn'ity fanomezana ity dia ny fahafahanao mandeha any amin'ny fivarotana enta-mavesatra, maka magazine, mametraka tsipika. Azonao atao tokoa ny manome fanomezana ara-batana amin'ny olona iray ary manondro amin'ny karatra fa efa eo am-pandehanana ny fisoratana anarana antsasaky ny taona.
mymc tsy hita sns
Nandany dolara teo amin'ny toerana fahavalo fotsiny aho, fomba iray tsara hitehirizana ireo fahitalavitra ankafizinao sy faritra tsy misy 30 andro manokana izay heveriko fa tokony ho fantatry ny rehetra. Ka izao dia hanokatra ny fanangonana ny lahatsoratro Prime aho mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny olona rehetra ao an-trano. Niverina avy tany amin'ny oniversite ireo ankizy.
Ny fialan-tsasatry ny fianakavianao dia tsy dia mahaliana loatra araka ny noeritreretinao azy. Ary te hanararaotra ny streaming ianao miaraka amin'ny maha-mpikambana anao voalohany. Tsy ny fahazoana ny maha-praiministra anao fotsiny no ahafahanao miditra amin'ny sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra maherin'ny antsasaky ny tapitrisa amin'ny Prime Video, izay mifaninana amin'i Netflix.
Ary azonao atao ny mieritreritra raha tsara na tsia ny lahatsoratra praiminisitra ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra, ny zava-dehibe marihina dia ny fahafahanao misoratra anarana tsy miankina amin'ireo fantsom-pahitalavitra tianao amin'ny alàlan'ny Prime amin'ny alàlan'ny fanalavirana ny telegrama na ny mpamatsy zanabolana anao. Tsara indrindra rehefa nanapaka tariby ianao. Saingy tsy ny fanomezana no omena.
Amin'ny maha-praiminisitra ahy, Amazon dia nanome ahy fidirana tambajotra izay tsy fantatro hoe nisoratra anarana, maimaim-poana tanteraka. Ka raha mijery ny MGM eto ianao, oh, 'tsy misy atahorana
Fa maninona no tsy mandeha amin'ny tehiko ny lahatsariko voalohany?
Tsindrio ary tazomy amin'ny fotoana mitovy ny bokotra Select and Play / Pause mandritra ny dimy segondra. Na, Avy amin'ny efijery lehibe an'nyFahitalavitra afo, mankanesa any amin'ny Settings. Avy eo mandehana amin'ny Device. Raha tsy izany, azonao atao ny mamoaka ny tadin'ny herinaratra avy amin'ilay fitaovana, miandry 10 segondra ary avereno miditra ao indray.
Hey Youtuber, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fampiasana ny mombamomba anao STB emu momba ny Tivimate, ho anao izay tsy mahalala ny dikan'izany, aza manahy, hasehoko anao ary hataoko izany tsikelikely mba hahitanao azy amin'ny lahatsoratro rehetra ampiasaiko STB Emu Pro ampiasaiko izany amin'ny afon-tsandriko dia tsy ho mpihazakazaka intsony ianao manokana tsy dia ampiasaiko intsony io fampiharana io satria tsapako fa antitra kely io raha ataonao Ny fanaraha-maso lavitra dia sarotra apetraka ankafiziko ka hasehoko anao ny fomba fananganana azy ireo.
Ka te-ho any amin'ny lavitra anao ianao ary tazomy ny bokotra ok ary avy eo mandehana any amin'ny toe-javatra anananao. handeha ho any amin'ny mombamomba anao dia hivoaka eto ny mombamomba anao, ka safidio ny fikirakirana STB izany no hahitanao ny adiresy mac anao, koa tsara ny adiresy mac oh eny esory foana aloha ny laharana serial ary avy eo mandehana any amin'ny adiresy mac tokony mariho tsara fa esory ny nomeraon-telefaona mandehana any amin'ny adiresy mac anao, soraty izany, mankanesa any amin'ny url vavahadinao ary eh, fantatrao fa adikao fotsiny izany, soraty mba hahafahanao manamboatra azy amin'ny tivimate ka andao amin'ny tv - Mandehana ny efijery lehibe nakariko ary raha tsy anananao izany dia manana lahatsoratra hafa momba ny fomba hametrahana izany aho dia hanampy playlist izao fa tsy kaody faran'izay mahery dia handeha ho any amin'ny vavahady stalker, ampidiro ny adiresy mpizara izay tamin'ny voalohany vavahady -URL ampiasainao ho an'ity izao. Nahazo ny fampahalalana rehetra aho ary nisoratra anarana tamin'ny tranokala antsoina hoe Stick Subs Okay raha tianao izany rehetra izany dia afaka mankany amin'ny FIRESTICKSUBS.com fotsiny ianao na hampiasa izay anananao fotsiny fa ho anao izay tsy manana na inona na inona, FIRESTICKSUBS.com no misy ahy Nahazo izany aho izao, miditra amin'ny url vavahady aho, mety tsy hitovy ny anao raha avy amin'ny tranokala hafa ianao, apetraho eto ary ankehitriny hanova ny adiresinay Mac izahay. Ity no adiresy Mac mahazatra izay hidiranao amin'ny STB-Emu-Mac Adiresy izay manomboka hatrany amin'ny 00: 1A: 79, ankehitriny ko Azonao atao ihany koa ny mamorona adiresy Mac anao, ataovy izay hahazoana antoka fa manomboka amin'ny 00: 1A: 79 sy ny fitambaran'ny isa sy litera izy io.
Ny isa dia mety ho avy a hatramin'ny f. Avy eo dia mandeha amin'ny manaraka izahay ary mieritreritra fa efa napetraka ny zava-drehetra ary miasa ianao dia tokony ho tsara izao dia efa nandramako tamin'ny maro, tsy izy rehetra no miasa fa amin'ny ankamaroan'ny ankamaroan'izy ireo dia miasa, fitsapana sy hadisoana fotsiny izany. tsara izany, ka ndao ho hitantsika fa feno izany tsara, manova anarana matetika aho ka hovako satria Fire Stick Subs. Nahazo izany avy amin'ny firesticksubs.com.
Hametraka an'ity anarana ity fotsiny aho mba hahafantarako hoe aiza no nahazoako azy na fantatro hoe inona no antsoina hoe serivisy ary eny dia hasehoko anao ny fomba fampiasana ny lavitra izao dia tiako kokoa izany satria afaka manampy ny tena tianao kokoa ianao customizable Ny rafitra dia haingana dia haingana dia hitako fa mihetsika tsara araka ny hitanao rehefa raisiko ity zana-kazo 60 isan-tsegondra ity dia tena intuitive izao izao ny fomba itiavako ny fahazoana ny kinova premium, ka ianao mankany amin'ny setting hamaha premium mila manana kaonty indray ianao ity dia miasa amin'ny afomanga sy ny ampinga nvidia hitanao fa manana zavatra maro isan-karazany misy aho ary efa voasoratra ara-panjakana efa voasoratra izany ka toa manome anao ny topy mason'i Kanada aho Jerry d manana fampisehoana tsara izahay ianao androany dia azonao atao ny mahita ny halehiben'ny farihy tiako holazaina fa tsy tena hitanao ny farany manome anao safidy bebe kokoa noho ny tena nataoko, izany no nofinofiny, izany no nofinofiny efa ela izay nefa bianca izay ao amin'ny ekipa manaraka ihany koa dia nilaza fa mino ny olona sasany Raha napetrany loatra ny bara, hany ka mety ho vato misakana loatra ny fahasembanana. Saingy ilay zazavavy tsy nahita tsara akory ary nanao ondana Harvard ho an'ny tetik'asa kilasy fahavalo dia nanana fahitana fa na dia mbola kely aza ny olon-drehetra dia ho salama tsara aho raha tsy Harvard ary ho toy ny tsy misy Harvard-Harvard dia i Harvard izany laharana voalohany ve? roa telo ho an'ny dimy ary nolazaiko tamin'ny reniko rehefa mandeha aho dia mandeha toa tsy afaka miteny amiko tsia ary izy izao no oyster voalohany, azonao atao ny mahita ny sokajy misy ny fiaran-dalamby mihazakazaka eny amin'ny lalantsara eo an-tokontany mijanona mandra-pahatongany Um, mba ho hitanao fa manana andalana maro ny maso ivoho izay mitondra mpandeha sy mpitsidika manerana an'i San Jose. Heveriko ho tsara kokoa fotsiny izany.
no ampiasaiko manokana, izay ampiasako amin'ny Fire Stick sy Nvidia Shield eto San Jose sy California izay misy fanavaozana bebe kokoa rehefa misy izy ireo. Ampitahao amin'ny, rehefa tonga eto dia hiezaka isika hahita hoe miadana izaitsizy ny mamoaka mofo cheesy vaovao tsy ho hitanao ny sokajy rehetra. Tsy hitanao daholo ny torolàlana amin'ny fahitalavitra fa heveriko fa mora kokoa ho an'ireo iza no vaovao ka asehoko izany amin'ny lahatsoratro ary manana fiara chevrolet eto izahay STB Emu Pro ao amin'ny Firestic kdried ahy na ny vaovao ekeko fa mpiara-miasa amin'ny tv amin'ny Fire Stick aho ka jereo Hanao ny tsy fitovian-kevitra ianao no mahatonga ahy manokana mampiasa tv ny tenako rehefa mampiasa M3U ianao, mazàna izany dia ho an'ny M3U, fa koa ho an'ireo izay nahazo fampahavitrihana Mac taloha ary tadiavin'izy ireo hivily sy hamono izany raha misy fampahalalana avelako ho tavela ao amin'ilay famaritana ary antenaiko fa ankafizinao ity lahatsoratra ity avia haneho hevitra ary hisoratra anarana amin'ilay fantsona, misaotra tamin'ny fijerena ireo olona marina i Fred ary mitatitra amina morontsiraka 700 kilometatra aho, maro dia maro tokoa ireo
Ahoana no fomba hanamboarako ny lesoka proxy HTTP ao amin'ny Amazon Prime?
MandehaAmazon Prime Videoary sokafy ny atiny tianao hojerena. Tokony hosakanana izao, miaraka amin'ny tsiaHadisoana proxy HTTP. Raha mbola manohitra nyHadisoana proxy HTTP, manandrama manadio ny cookies an'ny browser. Raha tsy izany, manandrama mpizara hafa na mifandraisa amin'ny fanohanan'ny mpanjifa VPN.
Salama Thomas eto.
Androany isika dia hiresaka ny fomba hamahana olana izay tsy hametrahan'ny Mac tranokala sasany. Manana fanamboarana dimy samy hafa kasaina hatao anio isika, koa araho. Eny ary, handeha hamaky vahaolana dimy amin'ny antsipiriany isika.
Raha tsy mandeha ny iray dia misy maro hafa hanandramana ary manasa anao aho hijery indray ireo ampahan'ny lahatsoratra mety ho vitako haingana loatra ho anao. Miala tsiny aho mialoha momba izany. Andao àry hanomboka, ary alohan'ny hanombohantsika dia tokony ho azonao antoka koa fa ny adblocker na ny rindrambaiko antivirus anao (oh.
Norton, BitDefender, sns) dia tsy miteraka ny olana, tsy miteraka ny olana, fa ny mampandeha azy fotsiny ary manandrana manokatra tranokala misy olana aminao. Eny ary, andao hanomboka laharana voalohany: ny dingana voalohany dia ny manindry ny sary famantarana Apple (zorony havia havia) dia tsindrio ny System Prefers ary raha manokatra izy dia tsindrio ny Network.
Ary eo amin'ny kiheba Wi-Fi (kiheba ankavia) tsindrio ny Advanced ary izao dia mila mitady zavatra roa isika. Voalohany, alao antoka fa tapaka ny IPv6. Manaraka izany, hanavao ny fifanarahana DHCP izahay hamerenana fotsiny ny fifandraisanao amin'ny tamba-jotra.
Tsindrio izao ny takelaka Hardware ary alao antoka fa napetraka ho mandeha ho azy ny fanamboarana. Ok, raha tsy nety taminao izany, andao hiroso amin'ny fomba faharoa. Ny laharana faharoa dia manokatra ny terminal ary ao amin'ny terminal dia alefaso ireto tambajotra baiko manaraka ireto - setv6off Wi-Fi.
Tsarovy fa ilay famaritana dia milaza ihany koa ny handika sy hametahana anao izay atoroko anao satria tsy mandeha izany raha manao typo ianao. Ity baiko ity dia tokony hihoatra ny toe-javatra misy manelingelina ny fametrahana ny IPv6 ho OFF. Raha tsy mety aminao izany dia andao hiroso amin'ny isa telo.
Eny, ity fomba ity dia somary sarotra kokoa izao. Ao amin'ny baran'ny menio ho an'ny Finder, kitiho ny Go eo an-tampony ary raha vantany vao tapanao ny Go, dia hisokatra ny menio milatsaka izay paompy amin'ny Folder. Ny safidy iray hafa rehetra dia ny manoratra ity baiko manaraka ity: command + shift + G Na izany aza, hanokatra varavarankely izay ahitanao / sns / mpampiantrano.
Sokafy izao ny rakitra fampiantranoana amin'ny TextEdit ary manasa anao aho hampiato ny lahatsoratra dieny izao mba hahazoana antoka fa mitovy tanteraka amin'ny ahy ny zava-drehetra. Raha toa ka tsy toa ahy izy dia tsindrio ilay lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe 'Hacks Fix' ao amin'ilay famaritana satria somary tafiditra ao io ary mety ho ny olanao. Okay, isa efatra.
Mba hanaovana izany, hamafana ny angona Safari izahay amin'ny ankapobeny, izany hoe sokafy Safari ary tsindrio ny Safari eo an-tampony Ankehitriny tsindrio ny Settings Now kitiho ny takelaka fiarovana data ary kitiho ny 'Manage data data'.
Tsindrio ny 'Delete All' eto ambany raha vao feno izany, ary rehefa mahita ny pop-up ianao dia tsindrio fotsiny ny 'Delete Now'. Io dia hamafa ny angon-drakitra Safari-nao rehetra ary mety hamaha ny olana. Raha tsy izany dia manana ny laharana 5 isika.
Ka ho an'ity vahaolana farany ity dia hataonay antoka fa vonoina daholo ny proxy web-nao, koa kitiho ny Applelogo ary kitiho ny System Prefers, avy eo tsindrio ny Network ary sokafy ny tabilao Wi-Fi Click Advanced ary sokafy ny takelaka Proxies . Hamarino tsara fa tsy voamarina ny zava-drehetra ao ambanin'ny 'Select protocol hanamboarana'. Ok daholo, izany indrindra no natao androany, raha tsy misy ireo fanamboarana ireo dia nataoko rohy paoma tao amin'ilay famaritana mba hahazoanao fanampiana amin'izy ireo na azonao atao koa ny maneho hevitra momba ny olanao ary mety mila izany koa ianao vahaolana manokana kokoa, fa mamaly ny hevitro aho ary hiezaka hanampy anao aho.
Misaotra anao nijery raha nanampy anao ity, azafady mba avelao ny toa na maneho hevitra na misoratra amin'ny sasany amin'ireto.
Loko lahatsoratra Skype - valiny sy fanontaniana mahazatra
Ahoana no hahazoako isa Skype maimaim-poana? Mandehana mankany amin'ny pejy Get a Skype Number. Hasaina hiditra ianao raha tsy mbola. Safidio ny firenena tadiavinao ny isa Skype, dia homena isa ianao. Safidio ny Tohizo na Asehoy ny isa eo an-toerana hafa hisafidianana isa Skype hafa.
skype foana ny famoahana
Skype tsy tapaka mamaky - ny fomba hiatrehana
Misy kaonty sandoka ao amin'ny Skype ve? Ny scammer Skype dia azo zahana! Androany dia maro ny mpisoloky Skype no miasa avy any Azia, Russia, Marokko ary Etazonia marina Skype. Mitady lehilahy manambady ao amin'ny Facebook, Linkedin na Twitter izy ireo ary manandrana mahazo fampahalalana manokana arak'izay azo atao. Hijery ny Skype amin'ny anaranao izy ireo avy eo ary hanampy anao.
skype tsy misy fakan-tsary
Skype tsy misy fakan-tsary - fanapahan-kevitra azo ampiharina
Misy fetran-tsoratra ve ny Skype? Ny isan'ny tarehin-tsoratra ambony indrindra alefa amin'ny Skype dia 160 *. Ny isan'ny tarehin-tsoratra ambony indrindra amin'ny hafatra an-tsoratra Unicode ao amin'ny Skype dia 70.
(c) 2022 thespeedcube.com. Zo Rehetra Voatokana.